Falanqeynta Kulanka FC Porto Vs Chelsea Ee UEFA Champions League
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Falanqeynta Kulanka FC Porto Vs Chelsea ee UEFA Champions League
Kooxda FC Port ayaa garoonkeeda R. Sanchez Pizjuan ku soo dhaweeneysa kooxda reer England ee Chelsea lugta hore Wareega 8 dhamaadka Champions league.
Garoonka R. Sanchez Pizjuan
Porto waxaa ka maqnaan doona goolhayaha da’da yar ee reer Senegal Mouhamed Mbaye, halka shaki uu ka jiro helitaanka daafaca reer Spain Ivan Marcano. Xiddiga reer Iran Mehdi Taremi iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Sergio Oliveira ayaa labadoodaba ganaax ku maqan.
Dhaawac: Mouhamed Mbaye
Shaki: Ivan Marcano
Ganaax: Mehdi Taremi, Sergio Oliveira
Dhanka kale, tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaan awoodi doonin inuu u yeero adeega khadka dhexe reer France N’Golo Kante, kaasoo dhaawac ku jira. Waxaa jira shaki ku saabsan helitaanka garabka Christian Pulisic iyo weeraryahanka Tammy Abraham.
Dhaawac: N’Golo Kante
Shaki: Christian Pulisic, Tammy Abraham
Sideed kulan oo fool-ka-fool ah oo ay labada dhinac wada ciyaareen, Chelsea Waxay badiyeen shan kulan, labo waa laga badiyay halna bar baro.
Labadan naadi ayaa kulankooda ugu danbeeyay ciyaaray sanadkii 2015 wareega group-yada ee tartanka UEFA Champions League. Chelsea ayaa 2-0 ku garaacday Porto, waxaana gool iska dhaliyay daafaca reer Spain Ivan Marcano iyo gool uu dhaliyay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Brazil Willian, oo haatan ku sugan Arsenal.
Previous articleFalanqeynta Kulanka Bayern Munich Vs Paris Saint-Germain ee UEFA Champions League
Next articleZinedine Zidane oo ka hadlay guushii ay ka gaareen Liverpool xilli uu amaan u hubiyay Vini Jr.